Media sy Fanoratan-gazety · Novambra, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Media sy Fanoratan-gazety · Novambra, 2014
Tantara mikasika ny Media sy Fanoratan-gazety tamin'ny Novambra, 2014
Bahrain 28 Novambra 2014
Azia Atsinanana 25 Novambra 2014
Amerika Latina 16 Novambra 2014
Ireo fanehoan-kevitra maro vokatry ny fanapoahana baomba ny toeram-piantsonan’ny fiarandalàmby Escuela Militar dia maneho ny fisaraham-bazana misy eo amin’ny fiarahamonina Shiliana.
Mety Ho Lalana Iray Hanasemporana Ireo Media Tsy Miankina Ny Fanamboarana Aterineto Haingam-pandeha Any Rosia
Ao Rosia, izay ahitàna fihenana haingana ho an'ny anjaran-toerana amin'ny sehatry ny Aterineto an'ireo media tsy miankina, loza iray lehibe mananontanona ny vinavina hisian'ny fahataperan'ny tsy fiandaniana sy ny fanivànana ny votoaty amin'ny Aterineto.
Ny Andron'ny Fifidianana, Nanakatona Ny Vohikala @Verdade Mpilaza Vaovao Ao Môzambika Ny Fanafihana Anaty Aterineto
Mozambika 15 Novambra 2014
Ny ankatoky ny fifidianana io fanafihana io no niseho ary nahavita nanakatona ilay vohikala vantany vao nifarana mihitsy ny fifidianana ka hanisa vatom-pifidianana.
Fitaovana Nomerika, Fampandraisana Anjara ireo Tanora Ao Tanzania sy Meksika Amin'ny Demaokrasia
Filan-kevitry ny Tanoran'ny Mwanza (Tanzania), #Yosoy132 (Meksika), ohatra roa amin'ny fampidirana ny tanora amin'ny fizotry ny demaokrasia izay noresahana nandritra ny Forum manerantany 2014 momba ny demaokrasia tao Strasbourg.
Azia Atsinanana 07 Novambra 2014